IATA: Rolls-Royce waxay xaqiijineysaa ballanqaadka ah in la furo dhaqanka ugu wanaagsan ee suuqa kadib
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » IATA: Rolls-Royce waxay xaqiijineysaa ballanqaadka ah in la furo dhaqanka ugu wanaagsan ee suuqa kadib
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Rolls-Royce ma takoorto shirkadaha duulimaadyada, nacaybka ama bixiyeyaasha MRO ee isticmaala qaybaha OEM ama dayactirka.
Rolls-Royce kuma adkeysan doonto in shirkadaha duulimaadyada ama shirkadaha wax kireeya ay ku biiraan adeegyada Rolls-Royce.
Rolls-Royce kama horjoogsanayso horumarinta qaybo aan OEM ahayn oo sharci ah ama dayactir aan OEM ahayn oo ay bixiyaan bixiyeyaasha MRO iyo soosaarayaasha qaybaha madaxa bannaan.
Siyaasadda Rolls-Royce ayaa ah inay siiso shirkadaha duulimaadyada, nugeystayaasha iyo bixiyeyaasha MRO inay si aan kala sooc lahayn u helaan qaybaha OEM, dayactirka iyo taageerada.
International Ururka Gaadiidka Cirka (IATA) iyo Rolls-royce plc Saxeexeen bayaan wadajir ah oo caddaynaya ballanqaadka socda ee soo saaraha mishiinka ee ku wajahan qaab furan oo tartan ku saabsan dayactirkiisa, dayactirkiisa iyo dayactirkiisa (MRO)
Dukumiintiga ayaa la dhameystiray dhowr bilood ka dib wada hadal wax soo saar leh iyo wadashaqeyn ku saabsan habka ugu fiican ee warshadaha loogu talagalay adeegyada MRO-ga.
Labada hay'adoodba waxay kuxiran yihiin afar mabda 'oo muhiim ah oo hoosta ka xariiqaya habka loo yaqaan' Rolls-Royce 'ee loo maro nidaamka deegaanka ee MRO waxaana lagu soo daray bayaanka rasmiga ah:
Rolls-Royce kama horjoogsanayso horumarinta qaybo aan OEM ahayn oo sharci ah ama dayactir aan OEM ahayn oo ay bixiyaan bixiyeyaasha MRO iyo soosaarayaasha qaybaha madaxa-bannaan, illaa iyo inta ay ka ansixinayaan jaangooyaha habboon ee hawo-mareenka;
2. Siyaasadda Rolls-Royce ayaa ah inay siiso shirkadaha duulimaadyada, nugeystayaasha iyo bixiyeyaasha MRO inay si aan kala sooc lahayn u helaan qaybaha OEM, dayactirka iyo taageerada (oo ay ku jiraan marin u helista Rolls-Royce Care);
3. Rolls-Royce ma takoorto shirkadaha duulimaadyada, qandaraasleyda ama bixiyeyaasha MRO ee isticmaala qaybaha OEM ama dayactirka aan ahayn;
4. Rolls-Royce kuma adkeysan doonto in shirkadaha duulimaadyada ama kuwa wax kireysta ay ku biiraan adeegyada Rolls-Royce.
Kuwa la filayo inay ka faa'iideystaan ​​waxaa ka mid ah shirkadaha duulimaadyada, diyaaradaha iyo cilladaha injineerada, iyo ururada doonaya inay bixiyaan adeegyada MRO ee matoorada Rolls-Royce.
Ku wareejinta Doha, Abu Dhabi, Dubai: Rakaabka Diyaaradda ...